တိရိစ္ဆာန်ထိန်းချုပ်ရေးအလုပ်သမားများကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့ Functions များ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / တိရိစ္ဆာန်ထိန်းချုပ်ရေးအလုပ်သမားများကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့ Functions များ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 1,382 views
မှရပ်စဲ၏လက်ကိုင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များကိုစီမံခန့်ခွဲ, အန္တရာယ်မကင်းဖြစ်ကြောင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ, သို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်မဲ့, နှိပျစသို့မဟုတ်စစ်ဆေးခြင်း.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သပိတ်သို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရက်စက်မှုများ၏အစီရင်ခံစာများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, သကျသခေံရှာတွေ့, စာစုဆောငျးသက်သေအထောက်အထား, နှင့်အစီရင်ခံစာများကိုထုတ်လုပ်.
သွေစံချိန်နှင့်ဖယ်ရှား, ကမြင်းကြော, သို့မဟုတ်မလိုလားအပ်သောဖြစ်ကြောင်းအခြေအနေများကနေတိရိစ္ဆာန်များနှိပျစ, လိုအပ်သောပိုက်ကွန်သို့မဟုတ်မေ့ဆေးအသုံးချဖို့.
ပြင်းထန်စွာထိခိုက်တိရိစ္ဆာန်များ Euthanize, သို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်, မဆိုထားသော.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကုသမှုဆက်စပ် Plan ကိုတရားစွဲဆိုမှု, တရားသူကြီးများတွင်သက်သေအထောက်အထားကိုထောက်ပံ့ပေး.
တိရိစ္ဆာန်ထိန်းချုပ်မှုဥပဒေများတို့ကိုသွန်သင်, နှင့်တိရစ္ဆာန်သက်သာချောင်ချိရေးနှင့်စည်းမျဉ်းနှင့် ပတ်သက်. အများပြည်သူ.
သူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ features တွေကိုစောင့်ရှောက်ခွေးမှာဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကိုပြောပြရန်ခွေးတစ်ကောင်ကိုအိမ်ပိုင်ရှင်ကိုဆက်သွယ်ပါ.
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏အစီရင်ခံစာများ Publish, နှင့်တိရစ္ဆာန်များ၏ impoundments ၏စာရွက်စာတမ်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား.
အခွအေနေဒီလိုသတိပေးထားပါတယ်သို့မဟုတ်ခွေးနှင့် ဆက်စပ်. အချက်အလက်- ဝယ်လိုအားဖမ်းဆီးမှုများနှင့် infractions မှတ်တမ်းတင်ရန်အာဏာပိုင်များ, သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ရာဇဝတ်မှုများ.
ခွေးတစ်ကောင်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အတူလိုက်နာမှုနှင့် ပတ်သက်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြောင်းအိုးအိမ်တိရိစ္ဆာန်များဆနျးစစျ, နှင့်ပါမစ်.
မူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့ရဲကိုသှနျသငျ, လူအစုအဝေးထိန်းချုပ်, နှင့်ခြေရာခံများနှင့်ပေါက်ကွဲမှုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်ချဉ်းကပ်မှုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ဆုံးမဩဝါဒပေး.
အလုပ်-related စာရွက်စာတမ်းအတွက်နားလညျမှု-နားလညျမှုရေးစပ်စာကြောင်းများနှင့်လိုင်းများ Reading.
Active ကိုနားထောင်ခြင်း-ရန်အခြားသူများကိုအပြည့်အဝအာရုံစိုက်မှုကိုထောက်ပံ့အခိုင်အမာအဘယျသို့,, ဖန်ဆင်းခံရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ယူပြီး, စံပြအဖြစ်အံ့သြမေးမြန်းချက်, အစားလက်မခံနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအချိန်များတွင်လမ်းပြနေထက်.
Active ကိုသင်ယူ-နားလည်ခြင်းတစ်ဦးချင်းစီကနောက်ဆုံးနှင့်အနာဂတ် problemsolving နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအသစ်အချက်အလက်များ၏ဖုံးကွယ်.
လတ်ဆတ်သောပြဿနာများကိုနားလည်သဘောပေါက်သို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်သည့်အခါနည်းပညာ-Pick သင်ယူခြင်းနှင့်ညာဘက်အခွအေနအဘို့အ instructionPERinstructional ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ကုသမှုကို အသုံးပြု..
ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏စောင့်ကြည့်ခြင်း-TrackingANDDiscovering ထိရောက်မှု, အခြားအရှေးရှေး, သို့မဟုတ်အေဂျင်စီများတိုးတက်မှု generate သို့မဟုတ်ကုစားလုပ်ရပ်များစဉ်းစားရန်.
လူမှုသူတို့လုပ်ပေးနေချိန်မှာသူတို့တုံ့ပြန်ဘာဖြစ်လို့ othersA သဘောထားတွေကိုမသိအမြင်-ဖြစ်ခြင်းနှင့် comprehension.
ရှေးရှေးကူညီဖို့နည်းလမ်းတွေရှာကြံ Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-ကွိုးစား.
လုပျထုံးလုပျနညျးအကဲဖြတ်-လေ့လာတဲ့စတိုင်စေရန်လိုအပ်ပြီးကို item လိုအပ်ချက်.
Tools များရွေးချယ်ရေး-ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အလုပ်လုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ် tools များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏မျိုး.
တပ်ဆင်နေ-Installing စက်တွေ, tools တွေ, ဝါယာကြိုးများ, လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်များ.
မတူညီတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်နှင့် ပတ်သက်. encoding-Writing ကွန်ပျူတာ applications များ.
ခြေရာခံခြင်းသည်-ကိုကြည့်ရှုခြင်း dial စစ်ဆင်ရေး, စမ်းသပ်မှုများ, သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောညွှန်းကိန်းတစ်ခုကိရိယာများသင့်လျော်စွာလည်ပတ်နေသည်သေချာစေရန်.
စစ်ဆင်ရေးနှင့်စနစ်များသို့မဟုတ် tools များ၏ကိုင်တွယ်-ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ.
functioning နဲ့ကမဆိုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြသည်အမှားများကိုနောက်ကွယ်မှ troubleshooting-ဆုံးဖြတ်အချက်များ.
ပြုပြင်တာတွေ-ပွငျလိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးချဖို့ devices များသို့မဟုတ် devices များ.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးအကဲဖြတ်-ဖျော်ဖြေစမ်းသပ်မှုများနှင့်ပစ္စည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ, ဖြေရှင်းနည်းများ, သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သို့မဟုတ်ထိရောက်မှုအကဲဖြတ်ဖို့.
အာဏာရနှင့်အသင့်လျော်ဆုံးတဦးတည်းကိုရှာဖွေအလားအလာအစီအမံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးစွဲချက်တို့နှင့်ကြီးသောအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း-စဉ်းစား.
systems တစ်ဦး technique ကိုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဘယ်လိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ-ဆုံးဖြတ်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံလမ်းကို, အခြေအနေများ, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအကျိုးခံစားခွင့်ကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်.
တခြားသူတွေရဲ့အချိန် Timemanagement-စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်လည်းကိုယ်ပိုင်အခါသမယ oneis.
ပိုက်ဆံအလုပ်ဖျော်ဖြေရှိသည်ဖို့သုံးစွဲခံရဖို့သွားပုံကိုငွေ-ကိုစူးစမ်း၏စစ်ဆင်ရေး, ဤအသုံးစရိတ်များနှင့် ပတ်သက်. အရောင်း.
ကုန်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများ-ရယူနှင့်ထူထောင်မှု၏စံပြအသုံးပြုမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်၏စစ်ဆင်ရေး, ဂီယာ, နှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအချို့လည်ပတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့.
အလုပ်သမားများ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်အရင်းအမြစ်များ-ရည်ရွယ်ချက်လူတွေကသူတို့အနေဖြင့်, ဖွံ့ဖြိုးဆဲ, နှင့်လုပ်ဆောင်လှုံ့ဆော်, အဆိုပါကျူးကျော်များအတွက်အပေါ်ဆုံးတစ်ဦးချင်းစီဖော်ထုတ်.
High School တွင်ဒီပလိုမာ (GED သို့မဟုတ် High School တွင်ညီမျှသောလက်မှတ်သို့မဟုတ်)
ကျော်လွန်6လများ, နူန်းကျော်ကျော်နှင့်တစ်နှစ်အပါအဝင်
တည်မြဲခြင်း – 84.68%
အကွောငျးရငျး – 87.44%
အမိန့် – 83.76%
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – 91.30%
အခြားသူများများအတွက်ပြဿနာ – 91.28%
လူမှု Direction အဖွဲ့ – 83.11%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 91.43%
ဖိအား Threshold – 90.20%
ဘက်စုံ / Mobility ကို – 88.42%
မှီခို – 91.50%
အနက်မှအာရုံစူးစိုက်မှု – 86.22%
ကျင့်ဝတ် – 92.60%
လွတ်လပ်ရေး – 88.93%
တီထွင်မှု – 83.61%
စဉ်းစား – 85.04%